Enwere ike idobere Pokémon Go Plus, ezigbo nkwado maka Pokémon Go | Akụkọ akụrụngwa
O kwere omume ugbu a idozi Pokémon Go Plus, ezigbo nkwado maka Pokémon Go
Pokémon Go, Egwuregwu ọhụrụ nke Nintendo maka ngwaọrụ mkpanaka ka nọ na akụkọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, maka otu ihe ma ọ bụ ọzọ, na agbanyeghị na ọ kabeghị maka nbudata na mba ole na ole. Taa ọ bụ akụkọ ọzọ kemgbe awa ole na ole O kwere omume ugbu a idozi Pokémon Go Plus, mgbaaka ọrụ nke egwuregwu ahụ.
Ngwa a, nke bụ nhọrọ zuru oke, ga-ewe egwuregwu nke egwuregwu a n'ọkwa ọhụrụ na nke ahụ bụ, dịka ọmụmaatụ, oge ọ bụla enwere Pokémon dị nso, ngwa ọrụ a ga-agwa anyị ka anyị dọọ anyị aka na ntị, anyị nwere ike ichu nta gbadata ya n'ụzọ dị mfe.
Dị ka anyị kwurula, ndoputa mgbaaka a, nke nwekwara ike iji ya mee ihe, enwere ike ịme site na Amazon maka ọnụahịa nke 39.90 euro. Ọ bụ ezie na Pokémon Go enweghị ike ibudata ya na Spain, ọ bụghị na Google Play ma ọ bụ na Storelọ Ahịa, enwere ike ịchekwa ngwa ahụ na Amazon Spain.
N'ezie, nnyefe ezubereghị, na mba ọ bụla ruo August 12 ọzọ. Ikekwe site na ụbọchị egwuregwu Nintendo adịlarị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mba. Ihe dị ka ọ ga - abụrịrị na Pokémon Go Plus ga - abụ ezigbo ihe ịga nke ọma na ọ bụ na ara ara agbapụtala gburugburu Pokémon Go dị oke, na ihe niile na - enyere aka ijide Pokémon ọhụrụ ga - adị obere.
You na-eche inweta Pokémon Go Plus ịchọta Pokémon ọhụrụ n'ụzọ dị mfe?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » O kwere omume ugbu a idozi Pokémon Go Plus, ezigbo nkwado maka Pokémon Go
A na-ahụ iPhone 7 ọzọ na onyoyo edozi na-egosi igwefoto ọhụrụ ya
Ndị a bụ ndị kacha mma Amazon Prime Day amụọ